अन्तिम बन्दै अमेरिकी डिभी, कहिले र कसरी भर्ने ?::Pathivara News
अन्तिम बन्दै अमेरिकी डिभी, कहिले र कसरी भर्ने ?
काठमाडौं, अनुदारवादी भनेर चिनिएका डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएसँगै अन्यौलमा रहेको अमेरिकी डिभी चिट्टा (इलेक्ट्रोनिक्स डाइभर्सिटी भिसा) एक पटकलाई खुल्ने भएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी कामदारबारे कडा नियम सार्वजनिक गरेपछि डीभीको भविष्य संकटमा परेको थियो । अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले एक सूचना जारी गरि पूनः एक पटक डिभी लोटरी खोल्ने निर्णय गरेको छ । अन्तिम पटक खोल्न लागिएको भनिएको उक्त डिभी अक्टोबर ३ तारिख अर्थात् असोज १७ गतेबाट आवेदन गर्न सकिनेछ ।
डिभीका नियममा यसवर्ष कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन । अन्तिम म्याद नोभेम्बर ७ तारिखसम्म रहेको यस वर्षको आवेदन समयमा नै भर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तिम समयसम्म कुर्दा प्राविधिक समस्या आउने हुँदा चाँडै नै भर्न आग्रह गरेको हो ।
बिज्ञप्ति अनुसार, डिभीका नियममा यसवर्ष कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन । अन्तिम म्याद नोभेम्बर ७ तारिखसम्म रहेको यस वर्षको आवेदन समयमा नै भर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तिम समयसम्म कुर्दा प्राविधिक समस्या आउने हुँदा चाँडै नै भर्न आग्रह गरेको हो ।
दूतावासका अनुसार, डिभी चिट्ठाका लागि कात्तिक २२ गते रातको पौने एघारसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । करिब एक महिनाको अवधि दिएर सार्वजनिक गरिएको डीभी चिट्ठा भर्न कुनै शुल्क नलाग्ने दूतावासले जनाएको छ । दूतावासले फाराम भर्न कुनै परामर्शदाताको सहयोग नलिनसमेत आग्रह गर्दै आवेदनसम्बन्धी सहयोग चाहिएमा परिवारको सदस्य, साथी वा अन्य विश्‍वासिलो व्यक्तिको सहयोग लिने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै डिभी पर्नेहरुले सन् २०१८ को अक्टोबरबाट भिसा पाउन थाल्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको कार्यनिति आप्रबासीमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत भएपनि अमेरिकी संसदले सेप्टेम्बर मसान्तभित्र यससम्बन्धि विधेयक पारिद गर्न नसक्दा डिभीको अवधी एक वर्ष लम्बिएको हो ।
शुक्रबार, अशोज १३, २०७४ मा प्रकाशित